Aaway adeegsadayaashii Manifold GIS? - Geofumadas
Xaggee dadka Manifold GIS isticmaala?
Febraayo, 2010 GIS kala cayncayn ah
Muddo ka hor, Guryaha Dutch-ka ah ee teknoolojiyada ayaa ii sheegay ereyadan:
“Si daacadnimo ah, waan layaabay waxa ku qoran bogga Manifold. Waxa dhacaya ayaa ah in aanan waligay ku arkin isagoo ku shaqeynaya mashiin "
Toddobaadkan, Patrick Webber - oo ka socda cilmiga Spatial Knowledge - wuxuu sameeyey hadal aan laga fiirsan oo hubaal ka dhigay garka aad u abuurayaasha qalabkan inuu gariiro. Inkasta oo ay ... aaminsanayan inay gadh leeyihiin, laakiin waxaan u soo qaatay milicsiga si aan ula socdo kan saadaalinta - ctions ee sanadkan.
Waa maxay dhibaatada Manifold?
Patrick wuxuu ku saleysan yahay aragtida Geoffrey A. Moore, buugiisa "Ka gudubka dabka”, Kaas oo qeexaya meertada nolosha ee ka dhacda qaadashada alaabada kumbuyuutarka. Mid ka mid ah marxaladahaas muhiimka ah waxaa loo yaqaan Abyss (Chasm), halkaas oo barnaamijku u baahan yahay inuu joogteeyo koritaanka joogtada ah iyada oo ay ku soo dhaweynayaan iibsadayaasha rabitaanka hore, si looga fogaado halista ah in aan waligood la gaarin qaybta suuqa.
Patrick wuxuu si cad uga hadlayaa sida uu ugu qanacsan yahay heerka cusub ee shirkadda abuurka Manifold, qaabka qiimaynta iyo iskaashiga isticmaalaha ee golaha. Laakiin waxay dhaleeceyneysaa arrin aad u jilicsan oo qaabka ganacsiga ah, sababtoo ah ku adkaysigaas oo ah inaanay lahayn iibiyeyaal ama wakiillo aan ka ahayn boggeeda, in kasta oo ay gacan ka geysato yeelashada qiimaha la aqbali karoWaxay noqon kartaa hunqaaco joojisa koritaanka.
Tani, waxay keenaysaa tirakoobyada Kulanka Manifold, halkaas oo aan tusno waxa aynu dhammaanteen malaynayno: Dadka haysta 7x version ma heli karaan sabab sababtoo ah inay tagaan 8x waxayna sugayaan inay arkaan waxa dhacaya 9x ku riyootay inay go'aan ka gaarto haddii ay guurto ama aysan. Waxay noqon kartaa qanacsanaan buuxda, laakiin haddii haajiritaanku u taagan yahay $ 50 oo keliya ruqsad ahaan, waa inaan ka fekernaa saameynta kale ee culus sida isbeddelka qaabka aan laga noqon karin, maxaa yeelay - tusaale ahaan - ma dhaafi kartid .map ka nooca 8 illaa 7 waxayna ku tusaysaa soo guuritaanka dhammaan shatiyada jira. Waxa aan laga dhihi doonin horumarka la sameeyay ama buugaagta isticmaalaha, taas oo hubaal waa in la sharraxay maxaa yeelay Manifold wuxuu bixiyaa oo keliya "i caawi"Jidkiisa.
Waxa dhici kara markaa, waa in Manifold uu sii ahaan doono markabkaas gantaalka qurxoon ee loo yaqaan 'geosmokers', laakiin waligiis rafcaan kama qaadan karo adeegsadayaasha caadiga ah. Waxay iskaga qiran karaan dood kasta oo ay rabaan -in hubaal ay jiraan- laakiin xoqidda miraha ESRI waxay u baahan tahay wax kabadan softiweer ka wanaagsan kan loo yaqaan 'ArcGIS'in waxyaabo badan oo ay tahay iyo kuwo badan yihiin-. Waxaad u baahan tahay inaad dhisto bulsho, yeelato xulafo iyagana guuleysta, goob juqraafiyeed oo ku qoran luqad kale, taageero aan ku saleysneyn calaamado, oo ay ku jiraan "wacdiyayaal tiknoolajiyadeed" iyo xitaa si macquul ah xitaa burcad badeedda
Marna software-ka lama liidayo, laakiin hal mar waxaan ka shaqeynay shirkado caadi ah, oo wax iibsigu u baahan yahay xiriir bini'aadam ah, halkaas oo laga helo hanaan taageero, tababar iyo cusbooneysiin liisanka ah (dhammaantood waa la bixiyay). isku mid Bentley Systems Waxay leedahay caqabad ay ku maamusho iibkeeda gobol ahaan, taas oo shaqeyneysa laakiin dib u dhigaysa macaamil ganacsi, maxaa yeelay ma ahan lacag maxalli ah, inta badan waxay leeyihiin nidaam dheeri ah. Arrinta Manifold waa inaysan oran, waa in iibsashada lagu sameeyaa khadka tooska ah, oo leh kaarka deynta, laga bilaabo xaqiiqda ah in celcelis ahaan degmo iyo dhammaan shirkadaha aysan lahayn mid; Iyo, kuwa naga mid ah ee soo maray, waxaan ognahay in wax iibsiga bangiga lagu wareejiyo ay leeyihiin heerkooda kakanaanta ee jawiga caadiga ah.
Aah! Waxaan ilaaway taageeradii. Liisanka Manifold wuxuu la yimaadaa labo calaamadaha, kaliya laba su'aalood oo lagu taageerayo. Haddii aad rabto wax intaa ka badan, iska bixi; fikraddu ma xuma, laakiin waa lagama maarmaan in la arko haddii ay shaqeyneyso iyo in kale. Taasi maahan garka in dadka, laakiin saddexda eray ee martiqaad marka ay iibsanayaan software ma ahan mid ku filan: "Ku rakib - Bilow - Baro "," sababtoo ah way adkaan doontaa in lagu qanciyo maamulaha in qorshe hawleedka sanadka cusub looga baahan yahay inuu ka baxo miisaaniyad loogu talagalay 15 calaamadaha ama bixiso tifatiraha geofumadas ee taageerida sheekada :).
Guntii iyo gunaanadkii: Manifold waa softiweer aad u wanaagsan, laakiin ma korayo. In kasta oo nooca 8 horeyba uga jirey durdurrada, calaamad muujinaysa inay caan noqotay, haddana dad aad u tiro yar oo ka tirsan websaydhka ayaa ka hadlaya awooddeeda, iyagoo aan ka qanacsanayn qaabka adeegga macaamiisha. Haddii ay sidan ku sii socoto, waxay u sii ahaan doontaa ciyaar loogu talagalay koox khubaro ah oo gaar ah waxayna lumin doontaa caan ahaanta iyada oo ah xalka dhabta ah ee GIS - taas waa waxa ay tahay. Iyo cutubka ugu dambeeya ee nuuca noocan ah ee sheekada, dhammaanteen waan ognahay.
Waxa laga filayo
Hagaag, dhinaca Manifold saaxiibbadiis waxay hoos u dhigayaan isla weyni. Gaar ahaan, aniga oo aan hoos u dhigin softiweerka aniga ila muuqda oo cajiib ah, ee aan u isticmaalo si joogto ah iyo in aan ka hadlay ilaa dhegahayga, waxaan arkay jawaabaha su'aalaha lagu weydiiyey goobta oo aan lahayn diirimaad iibiyaha laakiin ah madaxweynaha Isbahaysiga Bolivaria. maxay leedahayTani waa dowladdayda, halkan waxaan ku amri doonaa, iyo kuwa aan jeclayn, beddelaan kanaalka".
Iyada oo raaligelin laga bixiyo dabcan, kuwa jecel daaweynta noocaas ah iyo kuwa igu soo booqda waddamada koorta koonfureed. Laakiin hadday ku sugan tahay goobta Gabriel Ortiz - oo ah mid xor ah - waxaan ku waynay saaxiibo jawaabo xun awgood, waxa aan la dhihi karin meel ay ku sugan yihiin hal-abuurayaasha barnaamijka - taas oo aan bilaash ahayn - jawaab.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaan su'aal ka keenay waaxda xayeysiinta, mid kale anshax ganacsi, iyo maanta, waxaan ku adkaysanayaa waxa dadka qaar dhahaan: Farsamo yaqaanku qasab maahan inuu noqdo maamule wanaagsan, caqli wanaagsani wuxuu ku dhow yahay inuu noqdo ganacsade nacas ah. Waxaa jira takhasusyo, iyo guru kasta oo tiknoolaji ah oo noqda iibiye softiweer wuxuu u baahan doonaa koorso adeegga macaamiisha aasaasiga ah iyo casharro aasaasi ah oo ka yimaada suuqyadooda wixii aan ku imaanayn .NET API.
Maxaa ku dhici doona Manifold? Taasi xaqiiqdii waxay kuxirantahay abuurayaasheeda. Fikradayda, waxaan u maleynayaa in digniinta Patrick ay tahay inay yeelato saameyn togan.
Bentley Systems ESRI GIS kala cayncayn ah egeomates My
Post Previous" Hore Beddelaan degrees / daqiiqo / ilbiriqsi jajab tobanle
Post Next Sidee non-geomatics u arkaan khariidadahaNext »
14 Jawaabaha "Meeye dadka isticmaala GIS Manifold?"
Juun, 2010 at
Hehe, ii sheeg in aan u imid inaan ku fekero sida iyaga.
Jeroni isagu wuxuu leeyahay:
Sababtoo ah wax badan ayaa iiga jawaabay oo isku mid ah (ma aysan noqon karin mid kale) oo leh warqad aad u fiican laakiin mid caadi ah.
Waxaan u maleynayaa inay tahay inaad iibsato 8, sababtoo ah ma jiro nabadgelyo marka 9 uu imaan doono. Intaa waxaa sii dheer, marka nooc cusubi soo baxo waxaa inta badan jira waqti dalacsiin ah oo loogu guurinayo kaas oo kaliya ku kacaya US $ 50.
Waxaan haystaa su'aal ah inaanan ogeyn haddii ay xiiseyn karto dadka kale.
Soo iibso 8.0 ama u sugto 9 inay soo baxdo?
Anigu waxaan bedelay kumbuyuutarkeyga mana ogaanayo in aan ku rakibo version 6.5 iyo inaan sugno 9.0 inay soo baxdo ama iibsato oo ku rakibto 8.0.
Waxaan u isticmaalaa marmar iyo, badiyaa, tafatirka khariidadaha mashruucyada socodka, iyada oo aan ku dhowaad lafo-gurid ah, in kastoo aan jeclaan lahaa.
Maria isagu wuxuu leeyahay:
Qof walba ku kalsoonow:
Dhibaato ayaan la leeyahay Manifold. Waxaan xiray dusha sare ee aagana waxaan rabaa inaan sare u qaadno calaamadaha lafaha, laakiin waa in aan iyaga u gooyaa hal mid. Marka aan badbaadiyo manifold waxaan helayaa qalad:
WAXAAD U BAAHAN YAHAY MACLUUMAAD KU SAABSAN SHARCI
Maxaan samayn karaa?
Waxay wax u qabataa, laakiin aan si sax ah u xirmin, laakiin sida sawir laga keeno. Halkan waxaa ku qoran sida . Xaddidid kale ayaa ah inay ku timaado madow iyo caddaan, in kastoo iibsashada Plex.Earth lafteeda lagu sameyn karo midabbo leh saxnaansho fiican.
AutoDesktop isagu wuxuu leeyahay:
Haddii aanan qalad aheyn, waxaan u maleynayaa inaad isku xiri karto Autodesk Land ilaa Google Earth. Autodesk Land wuxuu leeyahay shaqooyinka GIS.
Haa, waxaad u sameysaa Google Earth, Virtual Earth, Khariidadaha Yahoo, horeba Khariidadaha Furan, sida lakabka georgefer (Dabcan sawirada).
Sidoo kale mar hadii muuqaalka la soo bandhigo, ikhtiyaarka "iskuxirka" waa la siin karaa, muuqaalka waxaa lagu keydiyaa gudaha, si loo saxo oo la dejin karo, horeyna loo qeybiyey. Waad uga tagi kartaa gudaha joodatabase-ka (.map qaab) ama aad u dhoofin kartaa qaab kale si aad ugu keydiso meel ka baxsan aadna uga tagto tixraac (kuxiran)
HELISTA isagu wuxuu leeyahay:
MAAMULKA ISKU HELI KARTAA GOOGLE BARNAAMIJKA HADDII HADDII WAA MAXAY TAHAY?
Waxaan halmaamay, salaan u ah ururada akhristayaasha.
Horeba faallooyinka waa ka dheer yahay isla boostada.
1 Nuqul: ugu yaraan Ku dhawaad ​​isku mid (ama ka yar) marka loo eego ArcGIS, fikradayda waxay ka badan tahay gvSIG.
Xawaaraha geoprocesses, waa mid aad u xoogan. Xitaa ikhtiyaarka si aad ula falgalaan GPU ku jira 64.
Maareynta lakabka isku mar, si wanaagsan wax u qabashada. Tan xitaa xitaa caqligiisa dhaqan ayaa ah kalabar dhif, maadaama lakabka uu lahaan karo polygons, xariiqyo iyo dhibco.
3. La-hawlgalid ... oo ay la socdaan xog-ururinno iyo jaangooyooyin, waa wax weyn, labadaba juquraafi ahaaneed, kaydinta, tusmeynta iyo adeegidda
Marka la eego jaangooyooyinka, kala tag qayb yar, wms (macmiil / server) wfs (server kaliya) tani waa mid aad u xun.
Iyadoo la raacayo xogta xogta GIS ee caadiga ah aad u fiican (shp, kml, xml, iwm), inkastoo ay ku jirto faa'iidada ay tahay in lagu dhoofiyo gdb sida lakab, iskuxirida kaliya waxay u oggolaaneysaa raajada iyo database.
CAD-ga waa mid kooban, mana horey u sii marin qaababkii ugu dambeeyay ee isticmaalka caadiga ah, dwg, dxf iyo dgn, si dhib leh oo ay taageeraan ficilada furan, v7 iyo 2000.
4 Qodobka afaraad: gebi ahaanba lama hubo, gaar ahaan haddii ay sii wadaan cadhadaas ku wajahan barnaamijyada ganacsi ee qiimaha-sarreeya, kaas oo xulashooyinka ay tahay in la sameeyo goor dhow ama goor dhow. Waxay ku tilmaameen mid aan la jaanqaadi karin qaabab ay ka mid yihiin dgn iyo dwg, had iyo jeer indha-indheeya in software monster-ka xiran yahay iyo xaalado badan oo waqtigiisu dhammaaday.
Maaha inay tahay inaad si sharaf ah u bixiso AutoDesk, laakiin lab, goor dhow ama goor dambe waa inaad fahanto macmiilka iyo xulafaduhu inay lagama maarmaan yihiin. Codkooda markay tixraacayaan tartanka, waxay siinayaan aragti ah inay yihiin antiESRI, laakiin iyagu ma aha antiMicrosoft, sababta oo ah habka ay u akhriyaan SQL Server, waxay kaliya ugu adeegaan IIS wixii u muuqda inay sidoo kale antiLinux marka aad ka hadlayso Apache.
Kuwa horumariya codsiyada waa ikhtiyaar weyn, ilaa iyo inta aan lahadlay isticmaaleyaasha 'Manifold', WAA KALAHAY SUPER qanacsan, sida kan leh midka teleefoonka ugu horumarsan. Laakiin barnaamijkan kombiyuutarka, ha ku mashquulin taleefonka ugu fiican, mararka qaarkood waxaa fiican inaad haysato midka qof kasta uu leeyahay, dhinacyada iibka adeegga, tababarka iyo is-weydaarsiga macluumaadka.
SyndicatoDeLectores isagu wuxuu leeyahay:
Kaliya cabitaanka aad siineysid ee ah MANIFOLD, waxaad ka heleysaa xiiso. Runtu waxay tahay in laysanka la awoodi karo. Waxaad faallo ka bixisay qaar ka mid ah aaladaha u qalma in la iibsado sheyga. Shakiga: 1. Sidee ku saabsan aaladaha tafatirka marka loo barbar dhigo gvSIG-ArcMap? 2 Xawaaraha geoprocesses iyo maaraynta lakabyo badan isku mar. 3 Is dhexgalka bulshada 4 Mustaqbalka aan la hubin, gaar ahaan soo bixitaanka iyo horumarka ka madax-bannaan jilicsanaanta. Kaliya iyada oo saddexda ugu horreysa ay iga qanciyaan, iyada oo la sii hagaajinayo kuwa barnaamijyada aan soo sheegnay, waxaan in yar ka baari lahaa wax ku saabsan kombuyuutarka.
Si nidaamsan… wax adag oo aad weydiiso saaxiib. Waxaan ku dhaaranayaa inaan maalin uun samayn doono, laakiin hadda:
Marka loo eego barnaamijyada waaweyn, tabaruca ugu weyn ayaa ah nooca qiimaha. Taasi waa mid aan laga maarmi karin, maadaama laga bilaabo $ 235 illaa $ 900 Manifold wuxuu sameeyo (ku dhawaad ​​ama ka badan) waxaad ku sameyn laheyd ArcInfo, ArcSDE, ArcIMS, MapObjects, ArcGIS Server iyo dhowr dheeri oo dheeri ah. Tan kuma jiraan liisanka waqtiga degdegga ah laga bilaabo $ 120.
Sida barnaamijka bilaashka ah, dagaalku wuxuu ku guulaysan lahaa si gaar ah, laakiin ma aha mid si wadajir ah u leh bisaylka ay ku guuleysteen.
Waxaa laga yaabaa in waxa Manifold kor u qaaday filashooyinka waa hal-abuurnimadiisa si wax loo qabto kuwa kale ka hor. Waxaa ka mid ah waxaan ka fikiri karaa waxyaabaha sida:
-Conectarse si / Google Maps Earth Google / Virtual Earth / Yahoo maps / Maps Open Street sida mid kale ma jiro sameeyey, waxaa by 2006 ka, kala soo bixi kartaa image sida aad u la StitchMaps maanta.
-Ka dhexgal qaab geediyeed ah oo wax ku ool ah (.map) kaas oo aad kula tacaali karto isla isla barnaamijkaas waxa kugu kici lahaa waqti fiican oo aad ku sameysatid Khariidadaha + postgreSQL + gvSIG ama isku darka la midka ah. Iyada oo ay fududahay in lagu daro xogta dibedda ama loo adeego wms / wfs.
-Waxaad ku qortaa / qori kaydka xogta badan, oo ay ku jiraan 64.
-Tusaale ahaan in la dhexgalo GPU.
- Xakamaynta tiknoolajiyada
Ma aha in waxyaabahan aan la sameynin dadka kale, waa in ay guud ahaan hore u sameeyeen. Sidoo kale, haddii aan samayno liis ah waxa dadka kale sameeyaan iyo Manifold maahan, waxaa jiri lahaa liis kale.
Waxa dhaca ayaa ah in in hal-abuurnimo ay u muuqato inaysan ku filnayn haddii barnaamijyada kale ay hal maalin uun sameyn doonaan isla sidii. Qaar badan oo ka mid ah hal-abuurnimadan waxay soo jiitaan oo keliya adeegsadayaasha takhasuska leh, iyadoo mudnaanta la siinayo oo aan lagu hawlgelin.
Hor-u-dhig isagu wuxuu leeyahay:
Si daacadnimo ah, iyadoo kooxda waaweyn (ArcGis, Autodesk, Mapinfo) iyo softiweerka bilaashka ah ee qgis, cows, gvsig) by Muxuu Manifold wax ku biiriyaa? Ma kaga jawaabi kartaa boosteejo nidaamsan?